Somalia online: Taliyihii ciidanka milliteriga Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo la xiray
Taliyihii ciidanka milliteriga Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo la xiray
Posted on May 30, 2016RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay taliyihii milliteriga Soomaaliya ee gobolka Galgaduud,Col. Maxamed Kaariye Caraale (Dhega-Dheere),markii lugu tuhmay inuu ka dambeeyay dilka sarkaal horay uga tirsana al-Shabaab oo markii dambe isku soo dhiifay ciidamada dowladda.
Sarkaalka ayaa markii la xirayay lugu war-galiyay in tababar loogu qaadayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan,halka oo markii dambe lugu xiray.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur ayaa xaqiijiyay xariga sarkaalkan oo markii laga war helay inuu ku lug leeyahay oo u amar ku bixiyay dilka sarkaalka ka soo goostay al-Shabaab,kaaso lugu magacaabi jiray Ciise Cali Mire.
Taliska Ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay inuu muddooyinkan ku howlanaa baaritaanka dilka loo geystay Sarkaalka isku soo dhiibay ciidamada ee ka soo goostay al-Shabaab.
Col. Dhega-Dheere oo ay ciidamadu xireen,waxaa la sheegay inuu hoggaamin jiray howlgallada ka dhanka ah ururka al-Shabaab ee bartamaha Soomaaliya oo gobolka Galgaduud uu ka mid-yahay.
Xariga taliyaha ciidanka milliteriga Soomaaliya ee gobolka Galgaduud,waxuu ka dhigaya markii ugu horreysay oo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka loo xiro dilka nin ka soo goostay al-Shabaab.